Koety : Ny fijalian’ireo vondrom-piarahamonin’ny tsy manana zom-pirenena any Koety, Ny fahanginana sy ny fanafoanana ny zo maha-olombelona · Global Voices teny Malagasy
Mbola migadra ireo Bidoon 15 mpikatroka mafana fo nitaky ny zony
Voadika ny 14 Novambra 2019 11:54 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Italiano, Español, Ελληνικά, English
Ireo Koetiana tsy manana zom-pirenena mitaky ny zony tamin'ny 30 martsa 2019. Sary nomen'ny mpisera Bidoon, avy tamin'ny Wikimedia [CC BY-SA 4.0]
Nosoratan'i Khalid Ibrahim, tale mpanatanteraka ao amin'ny Gulf Center for Human Rights, fikambanana tsy miankina tsy mitady vola izay mampiroborobo ny fahalalahana maneho hevitra, ny fiombonana ary ny fivoriana amim-pilaminana any amin'ny faritr'i Golfa sy ireo firenena manodidina azy, ity lahatsoratra ity.
Vinavinaina ho 120,000 eo ho eo ny isan'ireo olona avy amin'ny vondrom-piarahamonina Bidoon ao Koety, tsy manana taratasy ara-panjakana hahafantarana azy ry zareo. ‘Without’ ( tsy misy’) no azo andikàna ny teny Bidoon ho amin'ny teny anglisy ary voambolana ampiasaina mba hamaritana ireo vondrom-piarahamonina tsy manana zom-pirenena any amin'ny faritr'i Golfa.
Foanan'ny governemantan'i Koety ny zo fototr'izy ireo, indrindra fa ny maha-olom-pirenena, ny fanabeazana ary ny fikarakarana ny fahasalamana. Na efa hatramin'ny nahazoany ny fahaleovantenany tamin'i Angletera tamin'ny 1961 aza no nipetrahan'ny Bidoon tany Koety, ary na niaro ny tanin-dry zareo nandritra ny fanafihan'i Iràka an'i Koety tamin'ny 1990 aza ny sasany, dia mbola mitohy miaina tsy manana izay fitaovana ahazoany ny zony feno amin'ny maha-olom-pirenena sy ny zo fototra ry zareo.
Raha tokony ho olom-pirenena mahatoky no andraisan'ny governemanta any Koety azy ireo, dia naleony namorona sakana maro hanokana-monina azy ireo amin'ny fiarahamonina ary tsy nampiseho faniriana ny hanova izany fepetra izany izy. Raha nanolo-tena ho amin'ny asa am-pilaminana hiarovana ny zon'olombelona mba hitakiana ny zony ireo Koetiana sasany, ireo hafa kosa namoy fo ka namono tena, toa an'i Ayed Hamad Mudath, lehilahy 20 taona, izay maty namono tena tamin'ny 7 jolay 2019 noho ny hasorenana amin'ny tsy fahampian'ny taratasy maripamantarana azy izay tokony ho nampiasainy tamin'ny fianarana, asa ary ahazoana ireo tolotra natao ho an'ny daholobe.
Tamin'ny 2010, najoron'ny governemanta any Koety tamin'ny alàlan'ny didim-panjakana laharana 467 ny Ivon-toerana mikarakara ny olan'ireo Mponina Tsy Ara-Dalàna izay heverina fa hiandraikitra amin'ny fomba ara-drariny sy haingana ny olana lavarenin'ny vondrom-piarahamonina Bidoon, nefa tsy vitan'ity vondrona napetraky ny governemanta ity ny namadika ny toe-draharaha na ny niaro ireo zo fototra na ny zo maha-olona ny vahoaka Bidoon, taona vitsy taty aorinan'ny nisiany.
Mandritra izany fotoana izany, dia tsy nisy ny ezaka nataon'ireo sampan-draharaha miandraikitra ny fiarovana mba hanafoanana ny hetsika nataon'ny vondrom-piarahamonina Bidoon ho fanajana ny zon'olombelona . Taona vitsivitsy izay, dia ireo mpikatroka mafana fo ao amin'ny Bidoon no lasibatr'ireo sampan-draharaha miandraikitra ny fiarovana ireo. Ampidiriny am-ponja izy ireo ary amoronana fiampangana fotsiny izao noho ireo hetsika am-pilaminana mitaky ny fiarovana ny zon'olombelona izay ampiharan-dry zareo ny zony ho afaka maneho hevitra malalaka sy ny fahalalahana manao hetsika, araka ny antoka omen'ny lalàm-panorenana koetiana.
Fisamborana ireo Bidoon mpikatroka mafana fo
Nanomboka ny 11 jolay 2019 ny fisamborana ireo Bidoon mpikatroka mafana fo na dia tsy nisy didy ara-pitsarana navoakan'ny manampahefana mahefa aza. Lasibatr'ireo fisamborana ireo mpikatroka mafana fo sy ireo mpanao fihetsiketsehana izay nikarakara ireo hetsipanoherana mitaky ny hankatoavana ny zon'ny vondrom-piarahamonin'ny tsy manana zom-pirenena taorian'ny famonoan-tenan'i Mudath.
Bidoon mpikatroka mafana fo dimy ambin'ny folo no mbola any am-ponja noho ny nandraisany anjara tamin'ireo hetsipanoherana. Ireto avy izy ireo : Abdulhakim Al-Fadhli, Ahmed Al-Onan, Awad Al-Onan, Abdullah Al-Fadhli, Mutaib Al-Onan, Mohammed Khudair Al-Anzi, Yousif Al-Osmi, Nawaf Al-Bader, Hamid Jamil, Yousif Al-Bashig, Jarallah Al-Fadhli, Ahmed Shaya Al-Anzi, Hamoud Al-Rabah, Khalifa Al-Anzi ary Reda Al-Fadhli.
Tamin'ny voalohany, teo ambany fanarahamason'ny amsoivohon'ny Fiarovam-panjakana izay nandà ny fitakiana matetika nataon-dry zareo ny mba hamindràna azy ireo any amin'ny fonja ho an'ny daholobe, na efa vita aza ny famotorana, no nisy ireo voasambotra. Matahotra ireo manampahefana ireo ka ampanalaviriny ny fonja ofisialin'ny governemanta ireo mpikatroka mafana fo voasambotra ireo mandra-pisindan'ireo mariky ny fampijaliana sy fampahoriana, satria tsy mandray gadra vaovao ny fonja ofisialy raha tsy efa vita fizahana ara-pahasalamana.
Tsara ny manamarika fa, efa im-betsaka, ny mpampanoa lalàna no nandà tsy nandefa ireo Bidoon mpikatroka niharan'ny fampijaliana ho zahàna any amin'ny departemantan'ny fitsaboana ara-dalàna. Nolazain'ireo mpiasa sasany fa tsy andraikitry ry zareo ny manao io famindràna io — fanitsakitsahana miharihary ny lalàna koetiana izany izay miaro ireo meloka tsy hiharan'ny fampijaliana, indrindra fa ireo mpikambana ao amin'ny sampan-draharaha miandraikitra ny fiarovana.
Tamin'ny 2 Septambra, nampitsahatra ny fitokonany tsy mihinan-kanina ireo Bidoon mpikatroka voagadra . Sary avy amin'ny Visualizing Impact mampiseho ny fiantraika ara-fiziôlojian'ny fitokonana tsy mihinan-kanina [CC BY-NC-ND 4.0].
Tamin'ny 25 Aogositra 2019, noho ny fangatahan'ny Biraon'ny mpampanoa lalàna, dia nohavaozin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ho hatramin'ny 4 septambra 2019 indray ny fitazonana ireo vondrona ireo, daty izay hitsarana azy ireo noho ny vesatra telo lehibe : fanararaotana amin'ny fampiasana finday, fiantsoana fivoriana tsy nahazoana alàlana ary famonjena fivoriana tsy nahazoana alàlana.
Nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina ireo mpikatroka ireo ny 22 aogositra 2019, nitaky ny hamotsorana azy ireo avy hatrany sady tsy misy fepetra, mba atsahatra ny fiampangana azy ireo ary hajaina ny zo maha-olom-pirenena sy ny zo maha-olombelona ny vondrom-piarahamonina Bidoon ao Koety. Notohizan-dry zareo ny fitokonany tsy hisakafo na teo aza ny ambana nataon'ireo manampahefana hoe hosesehana an-tery amin'ny alàlan'ny fantsona izy rehetra, hoy ny nambaran'ny mpisolovava sy ny fianakaviana tamin'ny GCHR.
Nampitsahatra ny fitokonany tsy hihinan-kanina ry zareo ny 2 septambra, rehefa nahatsapa ny sasany fa miha-ratsy ny toe-pahasalamany. Manana aretina mitaiza azy ny sasany ary samy mila fikarakarana ara-pahasalamana sahaza azy daholo.
Nampiasa ny zony am-pilaminana hanana fahalalahana maneho hevitra sy ny fahafahana mivory ireo mpikatroka voasambotra ka tokony havotsotra tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra. Tsy tokony hogadrain'ny fanjakana koetiana izy ireo fa tokony ekeny ny maha-ara-dalana ny fitakiany sady tokony handray andraikitra izy hanao izay hanatsarana ny toe-piainan'ny vondrom-piarahamonina Bidoon ao amin'ny firenena amin'ny fankatoavana tanteraka ny zo sivika sy ny maha-olona azy ireo, tafiditra amin'izany ny fanajàna ny zo fototra hanana ny zo maha-olom-pirenena.